အသည်းခြောက်ခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများ... - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ဇူလိုင် 8, 2020 Morakod Deesomsak, M.D.
တကယ်တော့ အသည်းဟာ တော်တော် အလုပ်များပါတယ်။ အသားဓာတ် (protein) တွေ ထုတ်ပေးရတယ်၊ ကိုယ်ခံအားတွေနဲ့ သွေးခဲစေမယ့် ဓာတ်တွေကို သွေးထဲကို ထုတ်လုပ်ပေးရတယ်၊ အစာနဲ့အတူပါလာတဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေနဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းပေးရတယ်။
အသည်းဟာ ခြောက်သွားရတယ်ဆိုတာ အသည်းမှာ ရောဂါတစ်ခု နာတာရှည်ဖြစ်လာရာက စတင်ခဲ့တာပါပဲ။ ပျက်စီးသွားတဲ့ အသည်းဆဲလ်တွေနေရာမှာ ပြန်လည်ပေါက်ဖွားလာတဲ့ အသည်းဆဲလ်အသစ်တွေ စုပုံလာပြီးတော့ အနာရွတ်တွေ ဖြစ်လာတာကနေ စ တာပါပဲ။ ဒီကိစ္စက ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်မှာ ကြီးကြီးမားမား သက်ရောက်မှု ၂ ခု ရှိနေပါတယ်။ အသည်းရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ကျဆင်းလာခြင်း နဲ့ အမာရွတ်တွေဟာ အသည်းရဲ့ ဆံခြည်မျှင်သွေးပြန်ကြောတွေအပေါ်မှာ ဖိအားတွေ ဖြစ်လာစေပြီး portal hypertension လို့ ခေါ်တဲ့ အသည်းတွင်း သွေးဖိအားတက်လာစေခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အသည်းခြောက်ခြင်းရဲ့ အဖြစ်များတဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ
အစာမျိုပြွန် သွေးကြောများဖောင်းပွလာခြင်း – အသည်းခြောက်တာကြောင့် အသည်းတွင်းသွေးဖိအား (Portal hypertension) တက်လာပြီး အစာမျိုပြွန်အမြှေးအောက်မှာရှိတဲ့ သွေးပြန်ကြောတွေ ဖောင်းကြွလာပါတယ်။ အဲဒီဖောင်းကြွလာတဲ့ သွေးပြန်ကြောတွေ ရုတ်တရက် ပေါက်ပြီဆိုရင် လူနာဟာ သွေးအန်တော့တာပါပဲ။
ရေဖျဉ်းစွဲခြင်း – အသည်းတွင်း သွေးဖိအားတိုးမှုကြောင့် အသည်းက အရည်တွေဟာ ဝမ်းခေါင်းထဲကို ယိုစီးပြီးတော့ တဖြည်းဖြည်းစုပုံလာပြီး ဗိုက်ကြီးပူလာတာဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းခြောက်လူနာ ဟာ သွေးကြောတွင်းက ပိုလျှံတဲ့ အရည်တွေကို သယ်ဆောင်ပေးတဲ့ Albumin လို့ ခေါ်တဲ့ ပရိုတိန်းဓာတ်တွေ နည်းနေတတ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် လူနာဟာ ဝမ်းဗိုက်နဲ့ ခြေထောက်များ ဖောနေပြီး ချက်ကလည်း အပြင်ကို စူထွက်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို ဆီးရွှင်ဆေးတွေပေးပြီး ကုသနိုင်ပါတယ်။ ရေဖျဉ်းစွဲခြင်းရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြသနာတစ်ခုကတော့ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါပိုးဝင်ရင် ဖျားခြင်း ၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း နှင့် ဝမ်းလျှောခြင်းတို့ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဗိုက်ထဲက အရည်တွေကိုဖောက်ထုတ်ပြီး (paracenthesis) သွေးဖြူဥ အရေအတွက် နှင့် ဘက်တီးရီးယား ပေါက်ဖွားမှု ကို စစ်ကြည့်ခြင်းဖြင့် ရောဂါ ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။
အသည်း ကျောက်ကပ် ဝေဒနာ- ဖြစ်ခဲတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဝေဒနာ ဖြစ်ပေမဲ့ ရေဖျဉ်းကြောင့် ကျောက်ကပ် တဖြည်းဖြည်း ပျက်စီးသွားတဲ့အထိဖြစ်ရတဲ့ ပြင်းထန် နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာ အသေအချာ မသိပေမဲ့ အရည်စီးဆင်းမှု ပုံမှန်မဖြစ်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ် သွေးစီးဆင်းမှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေခြင်း၊ ဆီးရွှင်ဆေး အလွန်အကျွံ သုံးစွဲမှု စတာတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်စရာ ရှိပါတယ်။
အသည်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဦးနှောက်ထိခိုက်မှု – အသည်းပျက်စီးမှုကြောင့် စိတ်ရှုပ်ထွေးပြီး မဝေခွဲနိုင်ဖြစ်ခြင်း နဲ့ အသိဉာဏ် ရေချိန်အပြောင်းအလွဲ ဖြစ်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ အသည်းက ပုံမှန် စွန့်ထုတ်ပစ်နိုင်တဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေဟာ ရောဂါကြောင့် မစွန့်ထုတ်နိုင်တော့ပဲ အသည်းထဲမှာပဲ စုပုံလာပြီးတော့ အဲဒီကမှတစ်ဆင့် သွေးထဲ ရောက်သွားပြီး ဦးနှောက်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ထိခိုက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ လူနာ ဟာ နေ့ ည အိပ်ချိန် ပြောင်းခြင်း၊ လက်ချောင်းများတုန်ခါခြင်း၊ ဗလုံးဗထွေး စကားပြောခြင်း နှင့် သတိလစ်သွားခြင်း စသည်တိုင်အောင် ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းနဲ့ ဝမ်းချုပ်ခြင်းတို့ကလည်း ဒီအခြေအနေတွေ ဖြစ်လာအောင်လှုံ့ဆော်တတ်ပါတယ်။
သွေးယိုခြင်း – ပုံမှန်အားဖြင့် အသည်းဟာ သွေးကိုခဲစေတဲ့ ပရိုတိန်းအသားဓာတ်ကို ထုတ်လုပ်ပေး ပါတယ်။ အသည်းခြောက်လာရင် ပရိုတင်းထုတ်လုပ်ခြင်းတွေ လျော့ကျလာပါတယ်။ ထို့ပြင် အသည်း တွင်းသွေးဖိအားမြင့်ခြင်းနဲ့ သရက်ရွက် ဘေလုံးကြီးခြင်းတို့ကြောင့် သွေးခဲခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ platelets ခေါ် သွေးဥမွှား အရေအတွက်တွေလျော့နည်းလာပြီး ခန္ဓာကိုယ်တွင်း သွေးယိုခြင်းကို သာမာန်လူတွေထက် ပိုပြီး လွယ်ကူစွာ ဖြစ်လာစေပါတယ်။
ဟိုမုန်းကမောက်ကမဖြစ်ခြင်း – အသည်းခြောက်လူနာတွေဟာ တချို့ဟိုမုန်းတွေကို စွန့်ထုတ်ပစ်ဖို့ အားနည်းလာတဲ့အတွက် Estradiol ခေါ်တဲ့ မ ဟော်မုန်းများ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာများလာပြီး ရင်သားတွေ ကြီးထွားလာခြင်း ၊ လိင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှု မထိရောက်တော့ခြင်း နှင့် မြုံခြင်းတို့ဖြစ်လာစေပါတယ်။
ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေကုသခြင်း – အသည်းပျက်စီးမှု ရပ်တန့်စေဖို့အတွက် ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှာပြီး ကုပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ အသည်းရောင် ဘီနှင့် စီ ရောဂါများကို ပျောက်ကင်း အောင်ကုသပေးခြင်း၊ အရက်ဖြတ်ခိုင်းခြင်း။
အစားအသောက် – အသည်းခြောက်လူနာဟာ အစာကို ၃၅-၄၅ ကီလိုကယ်လိုရီ/ ၁ ကီလိုဂရမ်နှုန်းဖြင့် စားသင့်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲကမှ အသားဓါတ်ကို အနည်းဆုံး တစ်ရက်ကို ၁.၂ – ၁.၅ ဂရမ် စားပေးသင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရောဂါဖြစ်နေတဲ့အသည်းက စွမ်းအင်ကို ခါတိုင်းလို သိုလှောင်မထားနိုင်တော့လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူနာဟာ အစာကို တစ်နေ့ ၄ကြိမ် မှ ၆ကြိမ် ( ည အိပ်ရာမဝင်ခင်တစ်ကြိမ်အပါအဝင် ) စားသုံးသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဝမ်းခေါင်းတွင်းအရည်များ စုပုံမလာစေဖို့နဲ့ ဗိုက်ပူမလာစေဖို့ ဆားပါတဲ့အစာများ၊ အငန်များ လျော့စားပေးရန် လိုအပ် ပါတယ်။
အစာမျိုပြွန် သွေးပြန်ကြောဖောင်းပွတဲ့ရောဂါကို ရှာဖွေရန် အစာအိမ်မှန်ပြောင်းကြည့်စစ်ဆေးခြင်း( Upper endoscopy) – ရောဂါတွေ့ရှိခဲ့ရင် ဆေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် သွေးပြန်ကြောတွေကို ချည်နှောင်ပေးခြင်းနည်းလမ်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ကုသပေးနိုင်မယ် ဖြစ်ပါတယ်။
အသည်းကင်ဆာ အတွက် ကြိုတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း – အသည်းခြောက်ခြင်းဟာ အသည်းကင်ဆာဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများတာကြောင့် ultrasound ရိုက်ကြည့်တာကို ၆လတစ်ကြိမ် လုပ်သင့် ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကိုယ်ခံအားစံနစ်ကိုလည်း အသည်းရောင် ဘီနှင့်စီ ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးခြင်းအားဖြင့် မြှင့်တင်ပေး ထားဖို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
အသေးစိတ်စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက Facebook messenger သို့မေးခွန်းများပေးပို့ထားနိုင်ပါတယ်။
အသည်းခြောက်ခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများ... တကယ်တော့ အသည်းဟာ တော်တော် အလုပ်များပါတယ်။ အသားဓာတ် (protein) တွေ ထုတ်ပေးရတယ်၊ ကိုယ်ခံအားတွေနဲ့ သွေးခဲစေမယ့် ဓာတ်တွေကို သွေးထဲကို ထုတ်လုပ်ပေးရတယ်၊ အစာနဲ့အတူပါလာတဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေနဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းပေးရတယ်။
User rating: 2.78 out of5with 36 ratings
Morakod Deesomsak, M.D.
The First Class Honors M.D., Faculty of Medicine, Khon Kaen University, 2006. , 2015